Baahin: Axad, Dec 25, Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. Jaamac Nuur Shire, sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka miina-baarista Puntland oo ku geeriyooday qarax miino xilli uu ku hawlanaa miina-baaris; Afhayeen Shariif Xasan oo Garowe kula kulmay waxgarada Digil & Mirifle ee ku nool Puntland; Qaar ka mid ah mudanayasha baarlamaanka federaalka oo sheegay in ay dooran doonaan guddoon cusub. – Radio Daljir
Diseembar 25, 2011 12:00 b 0
Tababar lagu baranayo khatarta gudniinka fircooniga ee gabdhaha oo Qardho lagu qabtay.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika oo soo dhaweysay shirkii lagu soo gabagabeeyay Garoowe